သုညအမြင်	Posted on November 6, 2009	by mettayate “သုညအမြင်” (သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ပယ်ပုံ) – ကိုယ့်ခန္ဓာကို ပြန်ကြည့်လို့ ငါ သူတစ်ပါး ယောကျာ်း မိန်းမ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါဆိုတာ မတွေ့ရတော့ဘဲ ဆိတ်သုဉ်းသွားတာကို သုညအမြင်လို့ ခေါ်တယ်။ လောကသုံးပါးကို သုညဖြစ်အောင် ပရမတ်ပညာနဲ့ကြည့်နိုင်ရမယ်။
ဧ၀ံလောကံ အဝေက္ခနံ မစ္စုရာဇာ နပဿတိ။
သတ္တလောကလို့ခေါ်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေကို ရုပ်နဲ့ နာမ်ခွဲပြီး ရုပ်တစ်ပုံ နာမ်တစ်ပုံ ပုံပါ။ သြကာသ လောကလို့ခေါ်တဲ့ ဘုံဋ္ဌာနက မသိတတ်တဲ့အတွက် ရုပ်ပုံမှာ ပုံပါ။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ဘ၀ကူးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သဿတဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံ၊ ဖြုတ်ပုံ